Serbie : Fahatsiarovana ny faha10 taona nandarohan’ny OTAN baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2009 12:32 GMT
Ny 24 martsa 1999 no nanomboka nanafika an'i Serbie sy Montenegro ny OTAN. Naharitra 78 andro ny fandarohana baomba. An'arivony vitsivitsy ny olona maty tamin'izany, ary tranobe maro, tetezana, lalamby, lalana ary orinasa maro koa no potika. Ary fanampin'izany, olona maro no mbola miaina ny vokatra ara-pisainana sy ara-batana noho ny tahotra mbola ao anatin'izy ireo.
10 taona aty aoriana dia mahatsiaro izany fotoana nampatahotra izany ny mpitoraka bilaogy Serbiana. Hitantsika manaraka eto ny sasany amin'ireo soratra sy ny tahiry sasantsasany hatramin'ny nanombohan'ny ady, nadika avy tamin'ny teny Serbiana.
Nosoratan'i Dejan Jovic:
Nanafika an'i Yogoslavie an'habakabaka sy an-dranomasina ny OTAN androany. nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ny fanafihana. Nijanona ny fanafihana andiany voalohany rehefa afaka adin'ny 2. Eo ho eo amin'ny toerana 20 eo no lasibatra : ny Police Academy tany Novi Sad, ny seranam-piaramanidina tany Batajnica sy Danilovgrad (Montenegro), toby miaramila maromaro manodidina an'i Pristina sy Nis ary ireo orinasa sy fivarotana an'i Crvena Zastava tany Kragujevic. Nanomboka teo amin'ny manodidina ny misasak'alina ny fanafihana faharoa ary mbola mitohy mandrak'izao (00:45mn izao). nanambara ny fizotry ny ady i Yogoslavie. Ny alina lasa teo dia nosamborina i Veran Matic ary nakatona ny B92. Ankehitriny dia tsy misy radio na fahitalavitra mandeha afa-tsy ireo izay an'ny fanjakana ihany. tsy mahazo mandefa vaovao afa-tsy amin'ny alalan'ny antso an-tariby ireo mpanao gazety rehetra avy amin'ny firenena mikambana ao amin'ny OTAN na dia ny BBC aza. mpanao gazety 25 no nosamborina vonjimaika ary anankiray no niharan'ny herisetra. Ny anton'izany reehtra izany dia satria nisy horonan-tasry mihetsika kely nalefa ary nazava tamin'io fa ho henjana ny ady. […]
[…] Milaza i Milosevic fa momba ny fandriam-pahalemana sy ny firesahana izy. Sarotra ny mandanjalanja ny zavatra lazainy – satria na izy hilaza amin'ny OTAN fa vonona ny hametra-pialana na izy te hanaporofo ady maharitra. Amin'izao fotoana izao dia tahaka ny hoe tsy afaka ny hametra-pialana moramora izany izy. tsy azoko hoe nahoana izy no mora mifanaraka tamin'ny Tantsinanana taorian'ny fandarohana baomba, raha toa ka tsy nanao izany izy taloha. ny olona koa vao maika mihamankahala ny Tantsinanana mihoatra noho ny taloha. Hadinon'ny Tanstinanana fa voafidy ho filoha ara-dalàna i Milosevic ary koa tsy hoe tsy manana mpanohana tahaka an-dry Saddam Hussein akory izy.
Ny vaovao tamin'ny 1 ora no nilaza fa manameloka ny herisetra ny Rosiana sy ny Sinoa. Miantso fivoriana manokana amin'ny Security Council i Rosia. Amin'ity fanafihana ity dia manameloka mivantana an'i Milosevic i Clinton sy Blair. Mampitaha an'i Kosovo amin'i Bosnie i Clinton ary maneho fisalasalana amin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa. Manameloka ny mpikambana ao amin'ny OTAN i Inde satria tsy niraharaha ny Firenena Mikambana izy ireo. Milaza koa i Inde fa zary lasa fitaovana fanatanterahana ny adim-poko sy ny fisaratsarahana ny OTAN ary mety ho izany koa no hahazo an'i Kashmir[…]
Nanotatra i Angie01 ao amin'ny bilaoginy “Notes of Madness” (ny mariky ny fahadalana):
[…] Ny alina dia nivoaka tany an-davarangana aho ary nifoka sigara. Tsikaritro fa nisy kintana lehibe tsy mahazatra ary tena akaiky ahy teny amin'ny lanitra. Tsy fantatro hoe avy aiza izy ity. Tsy mbola nahita an'io mihitsy aho taloha. Nantsoiko ny fianakaviako. Toa tsy vonona anefa izy ireo ny hijery. Tsy nisy nahafantatra izay niseho na dia iray aza.
Kelikely avy eo dia niresaka an-tariby tamin'ny anabaviko avy ao ami'nny trano fidiovana aho. Teo an-tenantenan'ny resaka anefa dia nisy feo hafahafa.
nanontany ahy izy hoe inona izany? Tsy fantatro. “Inona no hataontsika izao?” hoy izy nanontany. Tsy fantatro. Lasa nijery aho. Novohako ny varavarana. Ary henoko ny feo nanao hoe zvvviiiiijuuuu. Nameno ny trano ny taratra jiro mena mavo. Avy eo nisy fipoahana be. Tena mafy be ilay izy ary nanapotika lasa nanana tsindrimandry hafahafa aho.
Mangatsiaka ny rehetra amin'izao fotoana izao. Ary misy fipoahana baomba hafa koa.
Henonao ny kiakiaka any ambadika any, mihazakazaka ny olona, mitomany ny ankizy. Henonao ny antsoantso any an'efitra any.
Nandondona tao aminay ny mpifanolo-bodirindrina aminay. Nilaza taminay izy ireo fa tokony hamonjy fialofana izahay. […]
[…] Tsy fantatra izay manjo ny ankizivavy any anatiny any. Malemy ny vehivavy. Nitrotro zazakely ilay mpifanolo-bodirindrina amiko iray… tsy misy rivotra iainana, tsy misy afa-tsy fofona ratsy sy tahotra. niova ny zavatra rehetra tao aantin'ny 20 minitra monja. […]
[…] Tonga ny mpifanolo-bodirindrina iray, mpialokaloka avy any Bosnie. Nolazainy fa tonga ho anay izy. Nolazainy koa fa tsy afaka hiaro anay amin'izany daroka baomba izany ny fialofana misy anay. Raha midaroka izy ireo dia ho zary lasa varavaram-pasana ho anay ny fialofanay. Lasa izahay ary tsy niverina tao intsony.
Tahaka izao no niatombohany. […]
namaly an'i Angie01 ny mpamaky ary toy izao izany:
Teo amin'ny 100m miala ny toby miaramila tany Sremska aho no nisy tafondro nisafo ny lohako. Tena nampatahotra ilay izy…
Avy eo dia vehivavy tanora no maty. Nivoaka izy vao nodoboka ny tafondro hijery izay zava-nitranga, hamantatra hoe taiza no nidoboka ilay izy. Teo amin'ny 1km miala ny toby miaramila izy ary tratry ny potika baomba. Niparitaka teny amin'ny lohany ilay izy na teny amin'ny tratrany. Tsy tadidiko tsara. Fa maty teo no ho eo izy, teo an-davarangan'ny rihana voalohany nisy azy. vao nifindra tao amin'io trano io izy…
Manan-janaka kely anankiroa izy…
Tsy misy mahalala na dia iray aza hoe aiza no tsy tia kokoa na ireo mpandaroka baomba na ireo tompon'andraikitra amin'izao zavatra izao.
[…] Ilay marary saina (Slobodan Milosevic, filohan'i Serbie sy Montenegro) no nandoro anay miaraka amin'ny firenena 19 mandroso indrindra. Ny tena tsy rariny aorian'ny fandarohana baomba dia hijanona eo amin'ny sezany ihany izy ary hadino kosa i Kosovo. Angamba ho metimety kokoa ny lalana hafa. […]
[…] Alahelo, fahakiviana ary fikorotanan-tsaina satria 10 taona aty aoriana dia mbola ao foana i Milosevic na dia ao aza ny endriky ny ministera vao haingana, izay nanambaran'ireto farany fa niseho iny fandarohana baomba iny noho ny fanendrikendrehana nataon'ny foko mpanadio tanàna (Avy taiza no nahatongavan'ny fiarabe fampangatsiahana aty amintsika?)
Nanoratra i Jasmina Tesanovic ao amin'ny bilaoginy “La vita e'bella” (Tsara ny fiainana):
26 martsa 1999, amin'ny 5 ora:
Manantena aho fa ho tafavoaka amin'ity ady ity izahay. Serba, Albaniana, ny tsara sy ny ratsy, ireo izay mitam-piadiana, ireo izay mitsoaka an-daharana, ny mpialokaloka any Kosovo, izay mirenireny any an'ala any sy ireo mpialokaloka any Belgrade izay mivenjivenjy eny an-dalana mitrotro ny zaza madinika ary mihazakazaka mamonjy izay toerana tsy misy baomba raha vantany vao maneno ny fanairana. Manantena aho fa tsy handao ny vady aman-janany mandrakizay ireo mpanamorin'ny OTAN. Hitako tao amin'ny CNN izy ireo, mitomany mijery ny vadiny miomana hanafika an'i Serbie. manantena aho fa ho velona avokoa isika rehetra, saingy hiova endrika izao tontolo izao. […]
Bosnia Herzegovina 14 Jolay 2021